Fambolena any Aostralia | Fitsangatsanganana tanteraka
Fambolena any Aostralia
maruuzen | | Nohavaozina tamin'ny 17/06/2021 23:24 | Aostralia
Iray amin'ireo firenena manan-danja indrindra ao Oseania i Aostralia, tany lavitra izay toa toerana tsy misy Covid ankehitriny, izay misy fiainana toy ny taloha. Na saika. Fa inona no fantatsika momba an'i Aostralia? Azontsika atao ny manomboka amin'ny alao sary an-tsaina izany amin'ny velaran-tany toa izany zava-dehibe ny fambolena any Aostralia.
Ary toy izany koa, ny fambolena sy ny olona dia nifamatotra akaiky hatramin'ny nanombohan'ny fotoana, ary ny tranga tany Aostralia, hatramin'ny fotoanan'ny fanjanahantany nataon'ny United Kingdom. Fa inona ny karazana voly eto, aiza ny tanimboly, aondrana aiza izy io? Izany rehetra izany androany, ao amin'ny lahatsoratray Absolut Travel.
2 Fambolena any Aostralia
Araka ny efa nolazainay tetsy ambony, ny fambolena dia asa tena lehibe amin'ny fampandrosoana ireo firenena toa an'i Aostralia, izay goavana ny fanitarana ny tany. Eto, araka ny fomban-drazana, dia nanjakazaka varimbazaha sy omby Ary mbola toy izany ihany mandraka ankehitriny, mankany amin'ny taonjato faha-XNUMX.
Marina izany maina ny ankamaroan'ny tanin'i Aostralia, fa tsy ny rehetra, ary ny aostraliana dia sahirana nametraka rafitra fanondrahana zava-dehibe izay miady amin'ny fahamainana voajanahary amin'ny tany isan'andro. Ny firenena dia manana fito tapitrisa kilometatra toradroa amboniny, eo anelanelan'ny tendrombohitra, efitra, morontsiraka tropikaly ary ny salan-tsira.
Inona no maniry any Aostralia? indrindra varimbazaha sy vary orza, fary, lupine (izy no mpamokatra lehibe manerantany), voanjobory asiana (izy no faharoa eto an-tany), canola, voaloboka ary amin'ny ambaratonga kely koa dia mamboly vary, katsaka, citrus ary voankazo hafa.
Nefa andeha hojerentsika, ny vokatra lehibe amin'ny fambolena aostralianina dia ny varimbazaha, orza sy fary. Manaraka azy amin'ny resaka fambolena izy ireo omby, omby ary omby, sy ny avy aminy toy ny vokatra vita amin'ny ronono na volon'ondry, henan'ondry, voankazo ary legioma. Ny varimbazaha no mitarika ary maniry any amin'ny fanjakana rehetra izany, na dia misy "fehikibo" aza any atsimo atsinanana sy atsimo andrefan'ny firenena. Saingy mifanohitra amin'ireo mpifaninana amin'ny hemisphere atsimo ao aminy, ny firenena dia tsy manana ririnina na loharano mahazatra, noho izany ny vokatra dia mifantoka amin'ny varimbazaha fotsy (ho an'ny mofo sy paty) ary tsy mamokatra voa mena.
Voavoly amin'ny ririnina, Mey, Jona ary Jolay, ary ny fijinjana dia manomboka any Queensland amin'ny volana septambra na oktobra ary mifarana any Victoria sy atsimo andrefan'i Australia amin'ny volana Janoary. Miasa mekanika be ny famokarana ary ny fambolena voamaina dia miara-miasa amin'ny fiompiana omby sy ny fambolena orza sy voamaina hafa. Ireo zavatra roa ireo dia miasa amin'ny toeram-pambolena iray ihany.
Ny serealy, ny menaka ary ny legioma dia vokarina betsaka, na hohanin'ny olombelona na ho an'ny biby fiompy mahazatra. Ny fary dia maniry any amin'ny tropika ary manan-danja ihany koa amin'ny toekarem-pirenena, fa toy ny tsy fanampiana ara-bola izany (toy ny tranga any Eropa na Amerika), dia sarotra ny mifaninana, ohatra, ny indostrian'ny siramamy Breziliana, izay mandresy azy amin'ny fifaninanana.
Ny fambolena fary dia tena zava-dehibe tokoa amin'ny morontsirak'i Queensland sy any avaratr'i New South Wales na any amin'ny faritra misy rano manondraka any Australia Andrefana. Saika tsy misy ny asa tanana, ny mekanika rehetra dia be mekanika, manomboka amin'ny fambolena ka hatramin'ny fijinjana sy ny fikosoham-bary.
Ny hena dia mahazatra any Aostralia na dia izany aza omby Tsy dia malaza toa an'i Arzantina na amidy toa ny Breziliana ohatra. Nefa tsy maintsy holazaina izany no mpanondrana hena faharoa aorian'i Brezila. Any amin'ny fanjakana rehetra any Aostralia dia miompy ny omby ary miankina amin'ny tsena ivelany amin'ny ankapobeny satria saika 60% ny famokarana aondrana any ivelany, indrindra ny Japon, Korea ary Etazonia.
Talohan'ny nahatongavan'ireo Eoropeana tany Aostralia dia mbola tsy nisy mpandresy teto. Ny anglisy no nitondra hazakazaka sasany ny Hereford, Aberdeen Angus na Bos taurus izay farany nanjaka. Androany dia be ny fitarainana manohitra ity hetsika ity, satria eran'izao tontolo izao dia misy ny resaka fampihenana ny fihinanana hena, ny maha-mpihinan-kena, ny habibiana amin'ny biby ary ny fiakaran'ny maripana amin'ny biby, fa ny zavatra rehetra kosa dia mitoetra ihany.
Ary ahoana ny ondry? Tamin'ny taona 70 tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia be dia be ny isan'ny omby, nefa nanomboka teo dia nanomboka nihena izy ary androany dia ampahatelon'ny an'ny izy tamin'izany fotoana izany. Mbola i Australia ihany no mijanona mpitarika eran-tany amin'ny famokarana volon'ondry merino. Ary vitsy ny mpamokatra omby ary vitsy ny tantsaha izay manambatra omby amin'ny voamaina.
Ny oliva dia namboly tany Aostralia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny ala oliva voalohany dia nambolena tao Moreton Bay, any Queensland, tao am-ponja (tadidio fa ny niavian'ny firenena dia ny zanatany famaizana). Tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX dia nisy hektara an'arivony manana ala oliva ary izany no nitomboan'izy ireo rehefa nandeha ny fotoana. Androany dia aondrana any Etazonia, Eropa, Sina, Japon ary New Zealand. Rehefa nanomboka nihinana menaka oliva bebe kokoa ny sinoa dia nanomboka nanambola tany Aostralia izy ireo ka toa hitombo ny famokarana.
ihany koa maniry ny landihazo ary araka ny efa nolazainay teo aloha, vary, paraky, voankazo tropikaly, katsaka, sorghum… Ary eny, voaloboka ho an'ny famokarana divay. Viticulture dia niaina firoboroboana tamin'ny taona 90 ary efa ho ny antsasaky ny famokarana dia naondrana tany Royaume-Uni ary tamin'ny faritra kely kokoa hatrany Nouvelle Zélande, Kanada, Etazonia ary Alemana.
Farany, tsy maintsy lazaina fa ny governemanta aostralianina dia tena mirotsaka amin'ny hetsika ambanivohitra rehetra: avy amin'ny fandrisihana nomeny an'ireo mpisava lalana voalohany amin'ny asan'ny tany, mandalo ireo hetsika fikarohana samihafa ataony na serivisy fanabeazana sy fahasalamana arosony, ho an'ny fandaminana ny tsena nasionaly sy iraisam-pirenena, ny fifehezana ny vidiny, ny fanampiana ara-bola ary ny toy izany. amin'ny.
Ny sinema aostralianina dia manana sarimihetsika marobe maneho ny fifandraisan'ny olona amin'ny tany. Raha tadidiko dia tadidiko ny andian-tsarimihetsika Ny Vorona dia mihira alohan'ny hahafatesany, izay ilay vehivavy tia ny pretra dia tompon'ny toeram-piompiana malalaka sy manankarena; ihany koa Aostralia, ilay horonantsary sarimihetsika Nicole Kidman miresaka momba ireo mpamokatra omby; na andian-dahatsoratra maromaro izay natokana ho amin'ny asa fambolena ny mpihetsiketsika. Zanakavavin'i McLeod, ohatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Fambolena any Aostralia
fermin Sanchez ramiirez dia hoy izy:
mandray fiarahabana manokana avy amin'ny olom-pirenena ao amin'ny vondrom-piarahamonina tantsaha ao amin'ny distrikan'i condormarca faritanin'i departemantan'ny fahalalahana bolivar, firenena Peru. Arahabaina aho noho ny kolontsain'ny olom-pireneny rehetra, ny haitao, ny mety hisian'ny tany mahavokatra amin'ny rano sahaza ho an'ny fambolena sy fiompiana. Raha afaka mangataka horonantsary vitsivitsy momba ny fampiharana ny haitao amin'ny fambolena sy ny fiompiana aho dia manantena aho fa afaka mifandray amin'ireo olona avy amin'ny lafivalon'ny tany misy antsika.
Mamaly an'i fermin Sanchez ramiirez
rariny dia hoy izy:
tena mahaliana ny fambolena ary mijanona mazava tsara aho hahahahaha
Mamaly an'i fery
Felipe Antonio Zatarain Beltrán dia hoy izy:
Tiako ny hahafantatra momba ny fanodinana ny distrikan'ny fanondrahana, indrindra ny an'ny lakandrano (vavahady mandeha ho azy)
Valiny tamin'i Felipe Antonio Zatarain Beltran
Fomban-drazana Rosiana: Baba Yaga
Savita Bhabhi: tantara an-tsary malaza malaza sy mampiady hevitra ao India